ô.cc – Homelọ
URL shortener na-amaghị ama
URL ezighi ezi!
. 1 elekere1 ụbọchị1 izu1 ọnwa1 afọ
E wuru ndi mmadu
ô.cc bụ onye na-amaghị URL shortener redirector. Wepụta njikọ gị n'ụzọ dị mfe, jikọta ya na ngwa nke gị. Enweghị stats, enweghị ndekọ ọ bụla. Nzuzo gi di nchebe.
Kedu ihe kpatara m ji chọọ itinye ma na-ebelata URL m?
ô.cc ga-eme ka nzuzo gị dịkwuo elu site na iji onye na-ezigara akwụkwọ (idefere) maka njikọ niile ị na-enye. Na mgbakwunye, ọ ga-eme ka njikọ gị dị mkpụmkpụ, na-eme ka ọ dị mfe ịkekọrịta na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na nyiwe ọ bụla ọzọ. I nwere ike hazie url nke gị ma kọọ oge kpochapụ. N'ihi na ọ na - echekwa njikọ ndị ịchọrọ ịmegharị, ọ na - enye gị ohere ibute urls n'efu.
Gịnị bụ onye na-ahapụ ihe?
Etu esi eji?
1. Tapawa ma ọ bụ dee URL gị na ntinye.
2. Tinye aha omenala (nhọrọ).
3. Tinye ụbọchị ngafe omenala (nhọrọ).
4. Pịa dị mkpụmkpụ.
Then ga - enweta URL ọhụrụ ị ga - ekekọrịta ma jiri!
Etu esi etinye ya na ntinye m?
Jiri naanị url https: //ô.cc/? ma tinye url izizi gi na ya.
Otu esi emechi URL ngwa ngwa?
You nwere ike ịbelata ma kọwaa URL gị ngwa ngwa ọ dịkwa mfe.
- Add gbakwunye mpempe akwụkwọ na-eso nke a na ọkacha mmasị gị.
- Navignyagharịa gaa na webụsaịtị ịchọrọ ka ị belata
- Pịa na ọkachasị ịhọrọ ô.cc ị mepụtara
- Mgbe ahụ!
Dọrọ na dobe mpempe akwụkwọ anyị na ngwaọrụ gị iji wepụta url dị mkpụmkpụ ka ị na-eji bọtịnụ nrụgide dị mfe na-agagharị.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji belata njikọ gị na - amaghị ama?
Nkpirisi okwu URL dị nso na anyị ogologo oge ugbu a. Anyị nwedịrị ike anyị agaghị achọpụta ịdị adị. Mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile na ịntanetị. Ihe izizi kpatara na-eme ka njikọ dị nkenke bụ na ọ dị mfe icheta maka ndị nwere ike ị na-achọ websaịtị ahụ na ịntanetị. Ka e were ya na ị nwere njikọ nke weebụsaịtị gị ma ọ bụ njikọ na-ebute ọdịnaya nke weebụsaịtị gị na URL maka nke ahụ buru nnukwu ibu, enweghịkwa ike ikwu ya n'ọnụ.
Ka e were ya na https://example.com/5dc1apgeniune ị nwere ike ịhụla ụdị URL ahụ mgbe ị na-enweta njikọ ga-edetu na bọọdụ ngwaọrụ gị. Ga-amatala na ị nweghị ike ịkọwa njikọ ahụ na ozi nkịtị gbasara onye ọ bụla.
Kedu ihe na - egbochi gị ibute ụzọ nke azụmaahịa na mgbasa ozi ọha na eze. Na nke ahụ bụ ihe dị ezigbo mkpa mere m ji nwee ihe ngbachi URL nke ị nwere ike nweta ike ọsịsọ ma nwee ike gụọ njikọ nke ị nwere ike pịnye ma kesaa ngwa ngwa. A na-akpọkwa ihe eji achọta ihe edo edo dị ka URL bụ ebe a na - aga ebe a kapịrị maka ọdịnaya dị na ụwa niile.
Usoro ntinye URL dị mkpirikpi na-arụ ọrụ n'ụzọ ga-eme ka ọnụọgụ mkpụrụedemede ahụ nwee njikọ ma ọ ka nwere ike iduzi ndị ọrụ n'otu ọdịnaya ahụ.
Mgbe ị na-enwetakwa nnukwu URL n'ihu gị ọ na-esiri gị ike icheta akụkụ ahụ niile. N'okwu a, URL mkpirisi ga-arụ ọrụ maka ịbelata odide ndị dị na URL mana ọ ka na-eme ka ọ nwee ike ịmegharị gị gaa otu ọdịnaya.
Site n'ime nke a ị ga - enwe njikọ URL dị mma karịa gị nke ga - adịrị gị mfe icheta ma dị mfe pịnye na ịkekọrịta. Etu nke URL na-eme mkpụmkpụ nwere ikike maka ijikọ ọtụtụ weebụsaịtị ma ọ bụ ọtụtụ ibe weebụ n'otu URL.
Isi ihe kpatara ịbelata URL bụ na ọ na-adị oke ọcha yana ọ dịkwa nfe ma na-enweghị ụdị mmejọ ọ bụla nwere ike ịkekọrịta site na ọrụ nzisa ozi. O nwekwara ụfọdụ uru nchekwa dị na nchedo ọnọdụ na data yana imekwa ka ọ bụrụ anụmanụ maka ụdị nnweta ọ bụla. Nkpirisi URL na - eme ka ọ dịkwuo mfe maka ịmepụta ọdịnaya ọchụchọ njikarịcha njirisi ihe ntanetị.
Ka e were ya na ị nwere saịtị blọọgụ ebe ị na-ekepụta mgbasa ozi maka ọrụ dị iche iche ebe ị ga-eso njikọ dị iche iche. Site na shortener URL ị nwere ike ịnye mkpụmkpụ mkpụmkpụ na ụdị URL ma tinye ya karịa isi okwu ka ndị mmadụ nwee ike ịchọta ọdịnaya yana ọ dịkwa mfe idozi ya na nchịkọta Google.
Dịka ọ na - eme ka ọ dị mfe maka ịkekọrịta njikọ ndị ọrụ ahụ nwere ike ịgagharị agagharị na icheta ha ngwa ngwa. Ọrụ nke shortening URL na-enyekwa aka na ntụkwasị obi nke ndị ahịa nke weebụsaịtị gị. Isi ihe kpatara ya bụ na site na ịbelata URL ị ga - enwe URL na - agụ ihe nke ọma, nke na - agakwa nke ọma na nnwale ọgụgụ ntanetị dị n'ịntanetị. Ma mgbe ọ dị gbasara mpempe akwụkwọ nchekwa ma ọ bụ mbipụta ị nwekwara ike inwe ohere iji mee ka njikọ gị dị ọcha ka o kwere mee ka enwere ike ịhụ ya dịka ntụkwasị obi dị ka ọ nwere ike ịdakwasị ndị ahịa.
Ntinye URL na-amaghị ama
URLdị URL a bụ nke ị na-eji wepụta ọrụ nyocha nke weebụsaịtị gị na-enweghị nsuso nke nkọwa gị zuru oke ma ọ bụ nkọwa nke onye na-eme nnyocha ahụ. Candị hyperlink dị otú ahụ nwere ike ibugharị ya ngwa ngwa n'ime ozi ịntanetị ma ọ bụ ọbụna na mmapụta nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ọbụna na peeji ọdịda. Iji URL na-enweghị aha na-enyere onye nwe weebụsaịtị aka ịnye njikọ dị nchebe na nke nzuzo nke weebụsaịtị ka ndị ọrụ wee nwee ike ịme nyocha nke ọdịnaya yana dịkwa mfe iji chọpụta ogo nke weebụsaịtị ahụ.
Ọ bụ isi enye aka ụdị ọ bụla nke ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ nke ịntanetị. Dị ka mgbe ị na-agafe na njikọ nke weebụsaịtị gị n'akụkụ ụdị nkwalite ọdịnaya ọ bụla, ọ nwere ike yie ka ọdịnaya gị na ezigbo ọnọdụ nke ọdịnaya gị na ebe nrụọrụ weebụ zuru oke ma nwee ike ịdabere na ya. okwu na-emebi ihe. N'aka nke ọzọ site na iji ihe na-enweghị aha na mkpụmkpụ na ụdị nke URL ahụ ga - enye gị ohere nzuzo ahụ, ọ ga - enyere gị aka ichedo ọdịnaya gị ruo n'ókè dị ukwuu.
Ọ dị mma maka ndị ahụ dị njikere ịwụnye ma tinye URL ọdịnaya nkwado. Enwere ọtụtụ ọrụ mkpụmkpụ URL na ịntanetị nke nwere ike ime ka URL gị bụrụ onye na-enweghị aha yana nwee mmekọrịta enyi na ngwa.
Forzọ maka URL dị mkpụmkpụ isi na-eso usoro nke http redirect. Enwere ike iji nke a dị mkpụmkpụ ma mee ụdị amaghị njikọ weebụ ma ọ bụ adreesị IP. Usoro a nwere ike ịdị mkpụmkpụ mkpụmkpụ ma dochie ụfọdụ ihe odide nke ogologo URL ma nwee ike ịme ya ka ọ bụrụ mkpụmkpụ na mbipụta ahụ ga-ejikwa otu ọnọdụ zuru ụwa ọnụ.
© 2022 ô.cc • All Rights ReservedKpọtụrụAmụma nzuzo